People.ai: Vhura iyo Simba reArtificial Intelligence kune Yako Ekutengesa, Kushambadzira, uye Makasitoma Ekubudirira Matimu | Martech Zone
People.ai: Vhura iyo Simba reArtificial Intelligence kune Yako Ekutengesa, Kushambadzira, uye Makasitoma Ekubudirira Matimu
NeChishanu, Gumiguru 26, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Nepo hungwaru hwekunyepedzera huchienderera nekuwedzera ma alarm pamwe nevazhinji, ini pachangu ndinotenda zvichafumura mikana inoshamisa yezvikwata zvekutengesa nekutengesa. Nhasi, yakawanda yemushambadzi nguva inoshandiswa kushandisa tekinoroji mhinduro, kufambisa data, kuyedza, uye kuongorora mhedzisiro yezvavo zvekushambadzira mukugadzirira mushandirapamwe unotevera.
Vimbiso yeai ndeyekuti masisitimu anogona kudzidza kubva pane zvatinoita, saka tekinoroji inogona kuzvigadzirisa pachayo, data rinogona kufambiswa zvinobudirira, bvunzo dzinogona kuitiswa zvoga uye mhedzisiro ichachinja hunyanzvi. AI haina kutsiva tarenda, ichaita kuti kugona kwedu, kutiburitsa kunze kwemasora, uye kutibatsira kusangana neyedu yakazara yekutengesa uye yekushambadzira mikana zvisati zvamboitika.
The Vanhu ...ai chikuva chinotora vese vanofambidzana, chiitiko, uye kubatirana kutyaira inoitika inoitika pane zvese zvekutengesa, kushambadzira, uye vatengi vanobudirira zvikwata. Nekuongorora data rehunhu hwevanhu, iyo sisitimu inogona kupa yakakosha mhinduro kune ese ari maviri ekuvandudza kutengesa uye kushambadzira mashandiro pamwe nekuverenga zvaunotarisira uye vatengi zvakanyanya.
60% yemasangano anotarisira kuwedzera kudyara muAI neanopfuura makumi mashanu muzana mu50
The Vanhu ...ai chikuva chine matanho matatu akasiyana:
Kuisa - chiitiko chedhata chakatorwa kubva kuemail kutaurirana, calendaring, nhaurirano dzefoni, uye musangano wevhidhiyo.
Iine 96 kunze-kwe-iyo-bhokisi API kubatana kune email, calendaring masystem, odhiyo, uye vhidhiyo musangano musangano, uye nhare masisitimu - People.ai inosimudzira iyo indasitiri inotungamira zviitiko kutora kugona uye inoshongedza sangano rako nekwanisi yekutora zvese zviende -kutengesa misika yevatengi kutaurirana.
ongororo - AI-based inoenderana master data mamodheru kubva kune yakasvibira dhata iyo inogona kupatsanura zvemukati, kuverenga manzwiro, kugadzirisa zvitupa, pfungwa bhizinesi-giredhi zvemukati, mune GDPR uye zvakavanzika zvinoenderana chikuva. Nekambani indasitiri-yakatendeseka account uye nemukana unoenderana nemaalgorithms, anogadziriska zvigadziri, uye otomatiki kutaurirana kwekugadzira vatungamiriri vehurongwa vanogona kuzorora zviri nyore kuti CRM vanofambidzana kubva kushambadziro nekutengesa zviitiko zvinongoerekana zvaguma munzvimbo chaiyo muCRM. Paunenge wafananidzwa, People.ai inoshandisa simba reAI kuongorora manzwiro, kuona zvinokwikwidza, uye kunatsiridza data rekutaurirana kune ese ari maviri ekugadzirisa bhizinesi uye kugadziriswa kwekutaurirana uye kuwedzeredza iyo nyowani nedhara dhata muCRM yako.
Dzorera Njere - Haisi chete iyo People.ai chikuva inopinza, kuongorora, uye kuwedzeredza data rako rebasa, inopawo iro data uye nzwisiso kumaturu auri kushandisa kare. Pamusoro peiyo yakasimba People.ai webhu kunyorera, People.ai yakagadzirirwa kuendesa data uye manzwiro zvakananga kune rako bhizinesi njere maturusi, data yekuchengetera maturusi, Slack, dzokera muCRM yako, kana zvimwe zvisingaverengeki maturusi kuburikidza neyedu yakasimba API. Dhata haichazonyangarika sekugadzirwa kwayo, inodhonzwa mukati, kuongororwa uye kuwedzerwa mari, ndokudzoserwa kwauri kwazvinokosha.
Tora Demo reVanhu.ai
Tags: aikuongororaAPIchakagadzirwa njerebusiness intelligenceCRMcrm njeremutengi kubudirira aiKurwirapinzakushambadzira aivanhu.aikutengesa aikuongororwa kwevhidhiyo
OneSignal: Wedzera Push Notifications neDesktop, App, kana Email
Kushambadzira Kwave Iyo Lynchpin yeMuchinjikwa-Unoshanda Kubudirira mumakambani